Mayelana NATHI - Baoding Mingwang Irrigation Equipment Co., Ltd.
Imikhiqizo yethu ihambisana ne-ISO 9001: amazinga wekhwalithi ka-2015 nobunjiniyela. Isitifiketi se-ISO9001 yisisekelo sokuphathwa kwenkampani. Yonke imikhiqizo yethu isebenza ekuniseleni konga amanzi kwezolimo, ipulazi, iL law & nisela ngenkasa.
Sinenethiwekhi yokuthengisa yomhlaba wonke enamagatsha ama-3 kwamanye amazwe. Iningi lemikhiqizo yethu lisatshalaliswa kabanzi emazweni angaphezu kwezi-40 nezifunda.
Futhi okwamanje singanikeza ukubonisana ngobuchwepheshe kanye nensizakalo yesisombululo sokunisela ngenkasa kanye ne-microspray kuwo wonke amakhasimende.
Sihlala siphikelela ekuhlangabezaneni nezidingo zamakhasimende nokubeka inzuzo yamakhasimende kuqala. Kule minyaka engamashumi amathathu edlule, imikhiqizo yethu ithengiswe ezindaweni ezahlukahlukene zaseChina futhi yathunyelwa emazweni angaphezu kuka-40 nezindawo ezihlanganisa iYurophu, iMelika, i-Afrika, iMpumalanga Ephakathi ne-Asia.
Wamukelekile ukusivakashela futhi uthumele uphenyo lwakho.
Isungulwe ifektri eyodwa yefilimu yezolimo.
Kukhiqizwe i-First set double line drip irrigation tape eChina.
Isungule ilabhorethri yokuhlola nokuhlola futhi yaqala ukuhlinzeka
Izinsizakalo zokuhlola zawo wonke amakhasimende adinga usizo
Setha inkampani yegatsha eDubai.
Setha inkampani yegatsha eHainan, eChina.
Kungani Us Mingwang
Ucwaningo & Ithimba Design
Iba nethimba locwaningo nesayensi, elinikezelwe ekuthuthukiseni nasekukhiqizeni imikhiqizo yekhwalithi ephezulu yamakhasimende emhlabeni wonke.
Singakhiqiza futhi sinikeze izinhlobo ezahlukene zemikhiqizo yokunisela, efana ne-Drip Irrigation Tape, Main Water Pipe, Micro Spray Tape, Fittings, Sprinklers njll.
ukunikela ngesevisi yokumisa okukodwa kusuka kusampula, ukuklanywa, ukukhiqizwa, ukuhlolwa kanye nangemva kokuthengiswa kwensiza.
Izinsizakalo zobuchwepheshe zokuthekelisa